बसमा यात्रा गरेकी युवतीलाई जव पुरुषले गरे यस्तो हर्कत, त्यसपछि…. युवतीले जे गरिन त्यसले सबैको मन जित्यो ! – Khabaarpati
October 24, 2020 goodmamLeaveaComment on बसमा यात्रा गरेकी युवतीलाई जव पुरुषले गरे यस्तो हर्कत, त्यसपछि…. युवतीले जे गरिन त्यसले सबैको मन जित्यो !
सचि‌हट नामक एक कम्पनीले स्टयाम्प बनाएको छ जसले पीडकमा नदेखिने मसी छ्याप्छ। त्यसलाई अल्ट्राभाएलेट किरणबाट पहिचान गर्न सकिन्छ।
परीक्षणका लागि पाँच सय वटा त्यस्ता छुवाइविरूद्धका स्ट्याम्प बिक्रीमा राख्दा ३० मिनेटमै सबै सकिएका थिए।